Sheet Die Series-JW-P-C2 - China Sheet Die Series-JW-P-C2 Mutengesi, Factory -Jwell
Kugamuchira zvishoma nezvishoma kudonhedza kwemvura chimiro uye yakati sandara yemapapiro erudzi rwekuyerera chiteshi, ine katatu diversion tekinoroji, manera maitiro kuyerera, zvinobudirira kubvisa iyo extrusion maitiro ekumanikidza akakomba kutungamira kuumbwa muromo deformation.Iyo yekumusoro kufa miromo ibhuku rinosundirwa-kureka mhando yakanaka-kugadzirisa elastic modulus lip. yakanyatsogadziriswa, ine yakavharika yekuvharira bhaa inogona kubvisa izvo zvinhu zvakadzikira, kugadzirisa izvo zvinhu kuora dambudziko nekuda kwekugara wakareba. Iyo yekufa miromo inogona kuchinjana, zvinoenderana neakasiyana makobvu akashongedzerwa akasiyana akavhurika kufa muromo.
Inoshanda kune PC, PS, PP, PE, PLA, PVC imwechete-rukoko kana yakawanda-riya ndiro.
Yekumhanyisa Yekumhanyisa Mutsara weHDPE Yemvura Pipe / Gasi Pipe